उत्तर सिरान पारेर सुत्न हुदैन, तर किन ? - Bishwaghatana
उत्तर सिरान पारेर सुत्न हुदैन, तर किन ?
जनवरी 22, 2020 जनवरी 29, 2020 Bishwa Ghatana0Comments उत्तर दिशा, उत्तर सिरान, उत्तर सिरान पारेर सुत्न हुदैन, दक्षिण दिशा, पुर्व दिशा, बास्तु शास्त्र, सिरान, सुत्न, हनुमान चालिसा
सधै सबैको घरमा प्राय जसो बोलिने सब्द हो, ‘उत्तर सिरानी किन पारेको ?’ बास्तु शास्त्रले पनि घर वा कोठामा राखिने सामग्री देखि लिएर सुत्ने कोठामा राखिने ओछ्यानको समेत शास्त्रीय आधारमा निर्धारण गरेको हुन्छ। शास्त्रहरूमा जीवन जिउने सैली र प्रकृतिकालागि खास कुराहरू बताइएका छन् । यी कुरालाई ध्यानमा राख्दा स्वास्थ्य लाभका, धन लाभ र सामाजिक लाभ समेत हुने गर्दछ साथसाथै सुख समृद्धि पनि प्राप्त हुन्छ ।
सुत्नु दैनिक जीवनको महत्वपूर्ण अंग हो । सुत्दाखेरी लापरवाही गरेमा स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर पर्छ । त्यसमाथि सुत्ने दिशा ध्यान नदिएमा मनिषलाई तनाव, हानि र स्वास्थ्य असर समेत पर्ने मान्यता रहेको पाइन्छ। आज हामि कुन दिशामा शिर अनि कुन दिशामा गोडा पारेर सुत्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्ने बिषयमा जरुरी सन्दर्भ समेट्ने प्रयास गर्नेछौ ।
दक्षिण दिशामा शिर अनि उत्तर दिशामा गोडा पारेर सुत्नु सर्वोत्तम मानिन्छ । यसरी सुत्दा धेरै बिमारी लाग्न पाउँदैनन् । वातावरणमा चुम्बकीय शक्ति रहेको हुन्छ र यो शक्ति दक्षिणबाट उत्तरतिर गइरहेको हुन्छ । हामीले दक्षिणतिर शिर पारेर सुत्दा यो ऊर्जा हाम्रो शिरबाट पसेर गोडाको बाटो हुँदै निस्कन्छ । यसरी ऊर्जाको यात्राक्रममा भोजन पनि मजाले पच्छ । यसरी सुतेर बिहानीपख उठ्दा हाम्रो दिमाग शान्त हुन्छ र हामी ताजापन महसुस गर्छौं । त्यस्तै दक्षिण तर्फा सिरानी राखेर सुत्नाले धन र आयु बढ्ने समेत मान्यता रहेको पाइन्छ।
यसको ठीक उल्टो दक्षिण दिशामा गोडा अर्थात् उत्तर दिशामा शिर पारेर सुत्दा चुम्बकीय ऊर्जा गोडाबाट छिरेर शिरतिर पुग्छ । त्यो चुम्बकीय ऊर्जाले तपाईंको मस्तिष्कमा अनावश्यक दबाब दिन्छ किनकि शरीरका विभिन्न अंगलाई छुँदै छिरेको ऊर्जालाई मस्किष्कले सोस्छ र भारी बढाउँछ । त्यो अवस्थामा तपाईं ५ देखि ६ घन्टा रहनुभयो भने दिमागलाई लगातार दबाब परिरहन्छ र रोगहरू लाग्न थाल्छ ।
दक्षिण दिशातर्फ शिर पारेर सुत्न सकिएन भने पूर्व दिशामा शिर अनि पश्चिम दिशामा गोडा पारेर सुत्नु राम्रो हुन्छ । सूर्य पूर्व दिशाबाट उदाउँछ र बिहान पूर्व दिशातर्फ शिर हुँदा सूर्य भगवानको सम्मान हुन्छ । पश्चिममा टाउको पारेर सुत्दा एकाबिहानै सूर्यलाई गोडा देखाएर अपमान गरेको ठहर्छ । पुर्व तर्फा शिर राखेर सुत्नाले मस्तिस्कमा उर्जा थपिने र बुद्धि बढ्ने समेत धार्मिक मान्यता रहेको पाइन्छ।
दक्षिणतर्फ किन सिरानी बनाएर सुतिन्छ ?
दक्षिण, उत्तर, पश्चिम, पूर्व जता बनाएपनि के हुन्छ ? हामीलाई मतलब भएन । ’cause हामीलाई लाग्यो यि कुरा अन्धविश्वास हुन् । पुरातन धारणा हुन् । यस्तै मानसिकता बोकेर हामीले सुत्नका लागि कसरी र कस्तो अवस्था अपनाउने भन्ने कुराको पालना गरेनौं ।
हाम्रो मुटु शरीरको तल्लो आधा भागमा छैन, त्यो तीन-चौथार्ए माथिल्लो भागमा छ । ’cause मुटुले रक्त प्रवाह गराउँदा शरीरको तल्लो भागभन्दा माथिल्लो भागमा बढी गाह्रो हनेगर्छ, गुरुत्वाकर्षणको कारण । त्यसैले मुटुभन्दा तलको भागमा रक्त प्रवाह हुने धमनीभन्दा मुटुबाट माथि रक्त प्रवाह गर्ने धमनी बढी परिष्कृत हुन्छ । माथिल्लो भागमा रगत प्रवाह गराउँदा त्यो अत्यान्तै सानो सिरामा हुन्छ, अर्थात कपालको रौं बराबर । यदि त्यसमा अतिरिक्त रगतको बूँद थपियो भने, त्यो फुटेर रक्तश्राव हुनसक्छ ।
धेरैजसो मान्छेको मस्ष्तिकमा रक्तश्राव हुन्छ । यसले खासै ठूलो हानी गरिरहेको हुँदैन, तर सामान्य असर भने गरिरहेकै हुन्छ । ३५ बर्षपछि मान्छेको स्मरणशक्ति वा ग्रहण गर्ने क्षमतामा ह्रास आउनुमा पनि यस्तै कारण हुन्छ ।
हामीले पृथ्वीको चुम्बकिय क्षेत्र अर्थात म्याग्नेटिक फिल्डको ’boutमा सुनेकै छौ । पृथ्वीमा चुम्बकिय शक्ति शक्तिशाली हुन्छन् ।
– जब तपाईं उठ्नुहुन्छ, दायाँतर्फ घुम्नुहोस् र विछ्यौनाबाट बाहिर आउनुहोस् । ’cause निद्राबाट उठ्नसाथ मेटाबोलिक प्रक्रिया एकदम धीमा हुन्छ । यस्तो अवस्थामा अचानक ओछ्यान छाड्दा मुटुमा दबाव पर्छ ।
– उठ्नसाथ मन्द मुस्कुराउने अभ्यास गरौं । ’cause हरेक बिहान हाम्रो निम्ति नयाँ जीवन हो ।
जान्न पर्ने केही कुराहरु
शास्त्र अनुसार सिरानीमुनी राख्नु पर्ने चिजहरु
१. हनुमान चालिसा
२. फलामको उपकरण
५. दुर्गा सप्तसती
← म गान्धीतिर हैन, झापड हान्दा मज्जा लाग्छ : दिपक मनाङ्गे
बार्सिलोना र रियल मड्रिड कोपा डेल रेको अन्तिम १६ मा प्रवेश →